ग्रहण लाग्दा के गर्ने के नगर्ने ? शास्त्रीय मान्यता यस्तो छ – Sudarshan Khabar
ग्रहण लाग्दा के गर्ने के नगर्ने ? शास्त्रीय मान्यता यस्तो छ
ज्योतिष विज्ञानले सूर्य ग्रहणको बेला गर्न हुने र नहुने कार्यलाई वर्गीकरण गरेको छ । शास्त्रमा भनिएको छ :
बन्धने च भवेत् सर्प बधे च नरकं व्रजेत् ।।
धर्मशास्त्रमा ग्रहण लागेका बेला विशेष काम , खानपान , मनोरञ्जन , शयन , श्रृङ्गार , मंगलमय धार्मिककृत्य , मूर्तिस्पर्श आदि गर्न निषेध गरिएको छ । सनातन हिन्दू दर्शनमा ग्रहणका समयमा मन्दिरहरु पनि बन्द हुने चलन छ । ग्रहणपछि ग्रहण नुहाउने र दानपुण्य गरेर ग्रहण पखाल्ने चलन छ ।
ग्रहणक‍ो बेला सुत्नाले आयुक्षय र रोगी ,दिसापिसाब गरे दरिद्रता र कीराको योनि , मैथुन गरे सुगुरको य‍ोनि , श्रृङ्गार गरे कुष्ठिरोग , भोजन गरे अधोगति, कसैलाई पीडादिए सर्प र हिंसा काटमार गरे नरक जानू पर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ ।
पूजा गर्नुअघि घरलाई शुद्ध पार्ने चलन छ । साथै चक्कु, कैंची, सियो धागोको काम गर्न नहुने बताइन्छ । ग्रहणको बेला घरभित्रै बसेको राम्रो मानिन्छ । किनकी ग्रहणको बेला हानिकारक प्रकाशले असर गर्ने खगोल बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यसैगरी फूल टिप्न, कपाल काट्न , कपडा धुन, ब्रस गर्न, दूध दुहुन र सुत्न नहुने मान्यता छ ।
ग्रहणको समयमा विभिन्न काम गर्न नहुने भनेर शास्त्रमा उल्लेख छ ।
१) यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन
ग्रहणको समयमा रोमान्टिक मुड नबनाउने । यो समयमा यौन सम्बन्ध राख्नु राम्रो मानिँदैन । शास्त्रमा ग्रहणको समयमा यौन सम्पर्क भएर बच्चा जन्मिएमा त्यस्तो बच्चा राक्षस समान पैदा हुने र दुर्गुणले भरिएको हुने उल्लेख छ ।
२) भोजन नगर्ने
३) ग्रहणपछि सरसफाइ गर्ने
ग्रहण सकिएपछि घरमा सरसफाइ गर्नु उचित हुन्छ । ग्रहणको समयपछि घर मन्दिर वा पुजा कोठा समेत सफाइ गर्ने र मूर्तिहरूमा जल फेर्नु पर्ने शास्त्रा उल्लेख छ ।
४) पुजा नगर्ने
ग्रहण समयमा पुजा गर्नु हुँदैन । मन्दिरमा पनि ग्रहणको समयमा पुजा पाठ बन्द गर्नु पर्छ । यो समयमा केही मन्त्र भने जप तप मन्त्र साधन गर्न सकिने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
५) गर्भवती बाहिर जानु हुँदैन
गर्भवती महिला ग्रहणको समयमा कहिल्यै पनि बाहिर जानु हुँदैन । ग्रहणको समयमा बाहिर निस्कँदा बच्चामा खराब असर पर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । ग्रहणको समयमा विभिन्न पराबैजनी किरणहरू उत्पन्न हुने हुँदा बच्चामा नकारात्मक असर पर्छ । ग्रहणको समयमा वातावरणमा समेत नकारात्मक किरणहरू पैदा हुने हुँदा घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो हुन्छ ।